Xildhibaan Baashe oo ka hadlay buuxinta xilka G/Ku xigeenka 1-aad ee Wakiiladda | FooreNews
Home wararka Xildhibaan Baashe oo ka hadlay buuxinta xilka G/Ku xigeenka 1-aad ee Wakiiladda
fooreMar 24, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)-Guddoomiye Ku xigeenka 2aad ee Golaha Wakiilada Somaliland Md. Baashe Maxamed Faarax oo maanta ka soo degay garoonk diyaaraha ee Berbera ee xarunta Gobolka Saaxil, ayaa sheegay inuu u sharaxan yahay buuxinta jagada Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee aqalkaasi ee uu dhawaan baneeyay Wasiirka cusub ee Maaliyadda Md. C/Casiis Maxamed Samaalle.
Guddoomiye Ku xigeenka labaad oo dhawaan iska casilay xilkaasi si uu isugu soo taago tartanka jagada Guddoomiye Ku xigeenka koowaad.
Md. Baashe Maxamed Faarax oo qolka nasashada ugu waramayay saxaafadda ayaa sheegay inuu xaalad caafimaad muddo kooban ugu maqnaa dalka dibadiisa.
“Waxa jirta in Walaalkay C/Casiis Maxamed Samaalle Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee Golaha Wakiiladda uu baneeyay xilkaasi ka dib markii uu noqday Wasiirka Maaliyadda waxaanu ahayn labada Guddoomiye Ku xigeen, waxaan jecelaystay maadaama oo walaalkay ka baxay meesha inaan ku durko jagada Guddoomiye Ku xigeenka koowaad oo aan iska sharaxo,”ayuu yidhi Md. Baashe Maxamed Faarax.
Xildhibaanka oo la weydiiyay waxa uu ka filayo xilkan uu isku sharaxay wuxuu yidhi “Rajo-wanaagsan ayaan ka qabaa, waxa kuu caddaynaysa inaan rajo ka qabo. Waxaanu ahayn laba Guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo ka labaad waa isku mid. Markaa ismaan casileen haddii aanan rajo ka qabin.”
Xildhibaan Baashe Maxamed Faarax oo laga soo doortay Gobolka Sool, kana tirsan xisbiga Talladda haya ee KULMIYE wuxuu ahaa Guddoomiye Ku xigeenka labaad tan iyo markii Golaha Wakiiladda la soo doortay bishii September ee sanadkii 2005-tii. Waana murashaxa ugu dhow inuu xilka Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ku guulaysto.
Previous PostW/Cadaalladda oo Faah-faahin ka bixisay 19 maxaabiis Budhcad badeed ah oo laga keenayo Seychelles Next PostTacsida Madaxweyne Siilaanyo ee Geerida Taliyihii Booliska Somaliland